Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo dib loo dhigayo bisha December: Warbixin - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDoorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo dib loo dhigayo bisha December: Warbixin
July 25, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
sanduuqa cod ku ridida doorashadii baarlamaanka Soomaaliya 2012-kii.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada Soomaaliya oo lagu balansanaa in ay dhacdo bisha September ayaa la filayaa in ay dib u dhacdo bisha December, sida ay Puntland Mirror u sheegeen ilo-wareedyo dibloomasi oo lagu kalsoonaan karo.
Doorashada labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa dhici doonta bisha October, sida ay sheegayaan ilo-wareedku.
Doorashada Madaxweynaha ayaa la filayaa in ay dhacdo bilowga bisha December ee dabayaaqada sanadkan, sida ku qoran dukumenti sir ah oo uu arkay warsidaha Puntland Mirror.
Dib u dhaca ayaa waxaa keenay arrimo farsamo oo ka yimid dhanka dowlada iyo guddiga madaxa-banaan ee doorashada.
Shirka hoggaamiyaasha siyaasada Soomaalida oo dhawaan lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa hoggaamiyaasha ku heshiiyeen qorsho hawleedka doorashada oo lagu heshiiyay in doorashada ugu dambaysa ee Madaxweynaha ay dhacdo tobanka bisha September.
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo hadda wakhtigiisa sharciga ah ku egyahay bilowga bisha September ayaa doonaya in markale dib loo soo doorto.
Iyadoo mudada ay ku egtahay baarlamaanka hadda jira ay ka harsantahay muddo bil ah wax ka yar ayaan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya iyo gobolada kale ee dalka laga dareemayn wax olole ah.
Wasaarada amaanka dowlada federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay asbuucaan amaro lagu xadidayo shirarka siyaasadeed ee lagu qabanayo huteelada Muqdisho.
October 22, 2016 Michael Keating: Cod iibsashadu iyo laaluushka waa run
March 16, 2019 Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo sheegay cod sir ah oo laga duubay in uu ahaa mid uu ugu talogalay beeshiisa
Dooni ganacsi oo u rarnayd ganacsato Puntland ah oo ku degtay biyaha Badda Cas
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa muujiyay walaac ku saabsan dhacdooyinka sii kordhaya ee farogelinta ah oo dhinacyo aan Afrikan ahayn ay ku hayaan arrimaha gudaha Soomaaliya. Intii lagu guda [...]